Ôkapy - Wikipedia
Ny ôkapy (Okapia johnstoni) dia biby misy nono ao Afrika mitovitovy endrika amin' ny jirafa sy ny zebra, miloko volontakatra misoritsoritra fotsy amin' ny tongony, izay mivelona ao amin' ny ala mikitroka ao amin' ny tapany avaratry ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô (RDK).
Iva kokoa noho ny jirafa ny ôkapy. Mety mahatratra 2 m ny halavany sady eo anelanelan' ny 200 sy 300 kg ny lanjan' izy efa lehibe. Lava ihany ny vozony na dia tsy mitovy amin' ny an' ny jirafa. Misolampy ny lamosiny, ary ny rambony dia mety mahatratra 35 hatramin' ny 45 m. Misy tandroka roa fohy misarona hoditra ny eo amin' ny handrin' ny lahy, ary indraindray koa ny an' ny vavy. Miloko mainty manopy manga ny lelany izay mahatratra 35 sm. Ny hoditry ny ôkapy dia mivolontakatra, misy mitsoriandriaka fotsy amin' ny tongony sy amin' ny vodiny. Biby masiaka sy mpandeha irery ny ôkapy ary mihinana ravin-kazo sy tsimoka ary voankazo izay raisiny amin' ny alalan' ny lelany.
Tandindomim-paharinganana ny ôkapy noho ny fihazana tsy ara-dalàna sy ny fanimbana ala sy ny fiitaran' ny faritra ambolena. Misy tahirin-javaboary manokana, dia ny Okapi Faunal Reserve izay natokana tamin' ny taona 1992 ao amin' ny RDK.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ôkapy&oldid=1040093"
Dernière modification le 18 Novambra 2021, à 18:51
Voaova farany tamin'ny 18 Novambra 2021 amin'ny 18:51 ity pejy ity.